BMW M340i (G20) nke zuru oke gbanwere ikpere wiil na-emeziwanye taya BMW M340i (G20) gbanwere ikpegharị ikpegharị wiil na-ebuwanye ibu - LFOTPP
Usoro BMW 3 anọwo na mmepe kemgbe 1975 ma nọrọ kemgbe afọ 44. Ọgbọ ọhụrụ nke usoro BMW 3 (G20 / G28) adọtawo uche mmadụ niile site na ntọhapụ na ahịa ahụ. Okwu a ga-eweta ọgbọ ọhụrụ nke BMW 3 Series (G20). ) M340i nke dị elu gbanwere ikpe.
N'ezie, ụdị dịka BMW M3 40i enweela nnukwu esemokwu oge niile. Otutu ndi mmadu si na ha adighi nma dika ndi M. Onye nwe ya kwuru na M340i mezuru ihe niile ọ chọrọ maka arụmọrụ ngwangwa: 3.0T, 382, 500 Nm (drive n'azụ) Ighapu 4.4 sekọnd, ụdị anọ nwere mpi 4.1), na ọ bụghị gbanyụrụ ụzọ, mmezi nke ihe niile M340i nwere ike igbo mkpa nke njem ọ bụla kwa ụbọchị.
Maka M340i, onye nwe ya enweghị afọ ojuju na wiil mbụ nke 19-inch, ọ bụ ezie na enwekwara ya taya Michelin, mana ihu na azụ bụ 225 / 40 / R19 Pirelli P7 taya oge niile, n'ihi na ịnya ụgbọ uko mgbe ụfọdụ ka na-ka ntakịrị ihe ka njọ.
Mgbe enyochachara, onye nwe ya mechara gbanwee Vorsteiner VFF-112 ma nwee ngwongwo arụmọrụ Michelin PILOT SPORT4S, ma bulie obosara taya ahụ n'ihu 255 / 265.
Nzọụkwụ na-esote, onye nwe ya dị njikere ịgbanwe ghuzịa ojii ahụ iji kpochapụ mpụga nke ụgbọala ahụ. N'otu oge ahụ, ụdị azụ azụ nke mbụ dị kwa mediocre. Ọ bụrụ na enwere ngwaahịa kwesịrị ekwesị, a ga-edochi ya.
Mpaghara BMW 3